ESL System Vagadziri & Vatengesi - China ESL System Fekitori
MRB mutengo wedijiti tag HL154
Nekuti yedu mutengo wedhijitari mutengo wakasiyana kwazvo nezvigadzirwa zvevamwe, hatisiye zvese zvigadzirwa ruzivo pane yedu webhusaiti kuti tirege kuteedzerwa. Ndapota taura nevashandi vedu vekutengesa uye ivo vachakutumira iwe ruzivo rwakadzama. Dhijitari yemutengo tag chinhu chemagetsi chinoratidzira chine ruzivo rwekudyidzana basa, rinonyanya kushandiswa mune zvechinyakare chitoro, chitoro chitsva, dhipatimendi chitoro fashoni, mushonga uye hutano, tsika uye varaidzo nemamwe maseru Icho chemagetsi kuratidza technol ...
MRB Yemagetsi pasherefu chitaridzi system HL213
Nekuti yedu yemagetsi masherufu chitaridzi chakasiyana zvakanyanya nezvigadzirwa zvevamwe, hatisiye zvese zvigadzirwa ruzivo pane yedu webhusaiti kuti tirege kuteedzerwa Ndapota taura nevashandi vedu vekutengesa uye ivo vachakutumira iwe ruzivo rwakadzama. Elektroniki masherufu emalebhu masystem ari kupinda muzvitoro zvedu, achibvisa zvekare mapepa emapepa ayo ave achishandiswa kwenguva yakareba uye akatsiviwa neruoko. Yemagetsi pasherefu chitaridzi inogona kure kudzorwa nekombuta kuti ichinje mutengo, pasina chero bhuku o ...
MRB yemagetsi mutengo tag HL213F yechikafu chakaomeswa
Nekuti yedu yemutengo mutengo tag wakasiyana kwazvo nezvigadzirwa zvevamwe, hatisiye zvese zvigadzirwa ruzivo pane yedu webhusaiti kuti tirege kuteedzerwa. Ndapota taura nevashandi vedu vekutengesa uye ivo vachakutumira iwe ruzivo rwakadzama. Iyi yemutengo mutengo weElectroniki unonyanya kushandiswa kune izvo zvakaomeswa chikafu munzvimbo inotonhora, kazhinji isu tinoti yemagetsi mutengo tag uye yemagetsi mutengo chitaridzi, chaizvo ndizvo zvimwe chete chinhu. Mutengo weElectroniki chigadzirwa chemagetsi chine ruzivo ...
Nekuti yedu ESL mutengo weti wakasiyana kwazvo nezvigadzirwa zvevamwe, hatisiye zvese zvigadzirwa ruzivo pane yedu webhusaiti kuti tirege kuteedzerwa. Ndapota taura nevashandi vedu vekutengesa uye ivo vachakutumira iwe ruzivo rwakadzama. Iyo yakazara ESL tag system ine zvikamu zvina: iyo huru komputa PC, EPD skrini, ESL tag uye smart handheld terminal midziyo. ESL tag Kutanga, iyo ruzivo rwezvinhu mune dhatabhesi yakaiswa nekombuta yekumisikidza kuburikidza neESL tag application software, uye ...
MRB e inki mutengo HL420
Kazhinji zvatinoti e inki tag tag uye e mapepa emutengo tag ndizvo chaizvo zvigadzirwa zvakafanana, asi zvinodaidzwa zvakasiyana. Nekuti yedu e ingi mutengo tag wakasiyana zvakanyanya nezvigadzirwa zvevamwe, hatisiye zvese zvigadzirwa ruzivo pane yedu webhusaiti kuti tirege kuteedzerwa. Ndapota taura nevashandi vedu vekutengesa uye ivo vachakutumira iwe ruzivo rwakadzama. Iyi 4.2 inch ESL tag inowanzo shandiswa muzviono zvakaita sezvinhu zvikuru uye zvigadzirwa zvemumvura. E inki mutengo ma tag ari kuwedzera kushandiswa m ...
MRB ESL chitaridzi system HL750
Nekuti yedu ESL chitambi sisitimu yakasiyana zvakanyanya nezvigadzirwa zvevamwe, isu hatisiye zvese zvigadzirwa ruzivo pane yedu webhusaiti kuti tirege kuteedzerwa. Ndapota taura nevashandi vedu vekutengesa uye ivo vachakutumira iwe ruzivo rwakadzama. ESL label ndeyevasina waya data vanogamuchira nemakodhi ekuzivikanwa. Ivo vanogona kudzoreredza akagashira maRF masaini kune anoshanda madhijitari masaiti uye anozviratidza. Icho chigadzirwa chemagetsi chinogona kuiswa pasherufu uye chinogona kutsiva echinyakare mapepa emitengo. Ratidza ...
Mumakore achangopfuura, chitoro cheChinese chakaratidza maitiro: kunze kwenyika uye online vatanga kujoina masimba, uye vatengesi vekare vekunze vatanga kugadzira e-commerce uye mapuratifomu enhare. Pfungwa yebhizinesi rekuchenjera yekutengesa yakaita basa rakakosha mairi. Iyo yemagetsi pasherefu chitaridzi, chinhu chitsva, chakapinda zvishoma nezvishoma mumeso eruzhinji. Pamusoro pechiratidzo, iyo Eshereffu yesherefu chitambi inoumbwawo nemabhuraketi akasiyana siyana ekumisikidza, maPDA, nezviteshi zvepasi, izvi zvese zvinowaniswa neAS ...
MRB ESL base chiteshi HLS01
Hukama hunosunga hwakagadzwa sei pakati peElectronic sherefu yesherefu uye ESL base chiteshi? Chekutanga isa smart ESL base chiteshi muchitoro, uye wobva wabatidza iwo mavara anosunga mune manejimendi kumashure kweiyo ESL base chiteshi. Mushure mekusungwa kwadzururwa, chitambi chinosungwa neESL base chiteshi chepedyo padyo nacho muchitoro. ESL base station manejimendi Huwandu hwematengo emitengo haugone, asi akawandisa matengo emitengo anotarisirwa neESL base chiteshi ...